को संग विवाह गर्दै छिन् मलाइका ? भन्छिन् विवाह गर्न कुनै उमेरले छेक्कदैन् म उहालाई आफुलाई भन्दा पनि पढि माया गर्छु – Wow Sansar
को संग विवाह गर्दै छिन् मलाइका ? भन्छिन् विवाह गर्न कुनै उमेरले छेक्कदैन् म उहालाई आफुलाई भन्दा पनि पढि माया गर्छु
एजेन्सी -बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुर चर्चित नायिका मलाइकाको प्रेमले यतिबेला बलिउड तातेको छ । उनिहरुको प्रेमलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिकाटिप्ण हुने गर्दछन् ।
मलाइकाले आफु र अर्जुनसँगको प्रेम पछिल्लो समय खुलाएकी हुन् उनिहरु दुबैले एक अर्काका तस्विर शेयर गदै आफ्नो प्रेम स्विकार गरेका हुन् । केहि समय पहिला मलाइकाले अर्जुनले आफुलाई राम्रोसँग बुझ्ने भएका कारण आफु अर्जुनको प्रेममा परेको खुलासा गरेकी छिन् । मलाइकाले आफुलाई अर्जुनले खुशी राख्ने र हँसाउने भएकै कारणले गर्दा आफुले प्रेम गरेको खुलासा गरेकी हुन् । उनिहरु दुबै न्युयोर्क छुट्टिमनाउन गएका छन् ।
अर्जुनको जन्मदिनमा पनि उनले दुबै जनाको तस्विर शेयर गदै ह्याप्पी बर्थडे मेरो क्रेजी, फनी र अमेजिङ अर्जुन कपूर भनेर लेखेकी थिइन् । मलाइकाले सामाजिक संजाल मार्फत नै आफ्नो प्रेम अर्जुनप्रति सावैजनिक गरेकै हुन्छिन् ।
यो पनि : तस्बिरका कारण ट्रोल बनिन् जान्हवीः युजर्सले लेखे- ‘सस्ती काइली जेनर’
मुम्बई । अभिनेत्री जान्हवी कपुर सोशल मिडियामा निकै सक्रिय रहन्छिन् । उनी सोसल मिडियामा मार्फत फ्यासँग नयाँ तस्बिर तथा भिडियो समेत शेयर गर्ने गर्दछिन् । अहिले पनि कपुरले सामाजिक संजालमा केही नयाँ तस्बिर शेयर गरेकी छन् । उनले शेयर गरेको तस्बिर देखेर युजर्सले उनलाई अमेरिकी मोडल काइली जेनरसँग तुलना गरेका छन् ।
सेतो ज्याकेटमा देखिएकी तस्बिरमा उनले ल्यापटपको अगाडी बसेर कफीको मज्जा समेत लिएको देख्न सकिन्छ । तस्बिरका साथ उनले लेखेकी छन् ‘वर्क फर्म होममा मज्जा आउछ’ । उनको तस्बिरलाई कयौ फ्यानले तारिफ गरेका छन्, भने कयौले ट्रोल गरेका छन् । कामको कुरा गर्ने हो भने उनी छिट्टै फिल्म ‘गुड लक जेरी’मा देखिनेछिन् । यो फिल्मको सुटिङ उनले पंजाबमा गरिरहेकी छन् ।
Prevयसकारण दुर्गेशले लुकाएका थिए श्रीमती
Nextदु :खद खबर कोटेश्वर सडकखण्डमा एक पुरुषको सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु, पहिचान खुलेन, को होलान् उनी?